Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya “Saraakiisha Ciidamada waa inay ka taxadaraan faafinta sirta Ciidanka..” – Balcad.com Teyteyleey
C/rashiid C/llaahi Maxamed Wasiirka Wasaarada Gaashaandhiga Soomaaliya ayaa sheegay in aan la faafin Karin Xogaha Ciidanka Xooga Dalka, isagoo sheegay in aysan aqbali doonin in la faafiyo oo Banaanka la soo dhigo waxyaabaha u qarsan Ciidamada Soomaaliya.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inuu ka shaqeynayo sidii loo qarin lahaa Xogaha Wasaarada Gaashaandhiga isla markaana loo ilaalin lahaa wax walbo oo u gaar ah Ciidanka, isagoo sheegay in arrimo ku saabsan Ciidanka iyo Siyaasadooda aan laga hadlin Karin loona baahan yahay in la ilaaliyo.
Mar uu Wasiirku la hadlaayay Saraakiisha Ciidamada Xooga Dalka ugu baaqay inay ka taxadaraan faafinta xogta Ciidanka, wuxuuna sheegay inaysan dhici doonin in la isaga dhawaaqo dagaal.
Dhanka kale Wasiirka Wasaarada Gaashaandhiga Soomaaliya C/rashiid C/llaahi Maxamed ayaa Ciidamada Xooga Dalka ugu The great thing about our store is that you can buy your viagra Soft for only 1.36 USD and save big on the purchase! Hurry up to get your best viagra Soft deal now! baaqay inay sii laba jibaaraan howsha adag oo ay hayaan,
QM oio faah faahin ka bixisay Qodabada looga hadlayo Shirwaynaha London